Varairidzi vachiratidzira muHarare gore rapera. Varairidzi vanoti hurumende haisi kuteerera zvichemo zvavo nemwoyo wese.
Varairidzi, avo vanga vambomisa kuramwa mabasa mushure mekunge vavimbiswa nehurumende kuti iri kutarisa zvichemo zvavo, vanoti vave kufunga kuramwa mabasa zvakare mushure mekunge hurumende yaratidza kunge yave kukweva makumbo pazvivimbiso zvayo.
Munyori musangano revarairidzi reProgressive Teachers’ Union of Zimbabwe, VaRaymond Majongwe, vanoti hurumende, kuburikidza negurukota rezvedzidzo, Muzvinafundo Paul Mavima, yakanga yavavimbisa kuti vachasanga pakati pesvondo rino kuti vapedzese nhaurirano dzavakatanga svondo rapera, asi svondo rave kutopera pasina chaitwa.
VaMajongwe vanoti vakanyorera kuhurumende vachiiyeuchidza nezvemusangano uyu, asi vanga vasati vawana mhinduro, izvo zvave kuita kuti vafunge kuti vakatambiswa bhora risina mweya.
Varairidzi, avo vakatanga kuramwa mabasa musi wa5 Kukadzi, vakadzokera kubasa neMuvhuro wapfuura zvichitevera nhaurirano dzavakaita nehurumende nemusi weSvondo, Kukadzi 10, 2019.
"Takasangana na minister ndokusanaga nemamwe makurukota ehurumende vakuru vePublic Service Commission, ndokuwirirana kuti tichasangana svondo rino, asi nhasi aveChina musangano hausati waitwa, chinova chinhu chinoratidza kuti zvese zvakaitwa - zvakaitwa in bad faith," VaMajongwe vadaro.
Vanoti pamusoro pekudzokera mukuramwa mabasa, varairidzi vari kurongawo kunyora tsamba inoenda kudare reparamende vachisvitsa zvichemo zvavo.
Studio7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi.